SPF လည်း ပါ အစိုဓာတ်လည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Superscreen Daily Moisturizer!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » SPF လည်း ပါ အစိုဓာတ်လည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Superscreen Daily Moisturizer!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ SPF လည်း ပါ အစိုဓာတ်လည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Supergoop ရဲ့ Superscreen Daily Moisturizer လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Moisturizer လေးမှာ SPF 40 ပါဝင်တဲ့အပြင် သဘာဝအတိုင်း အစိုဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ Blue Green Algae, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှ ထုတ်လွှတ်တတ်တဲ့ Blue Rays တို့ကို အလွှာတလွှာအဖြစ်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ရှားပါး သတ္တုဖြစ်တဲ့ Cerium, ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်နွမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးဖို့ရန်အတွက် Moisture-binding plant Formula ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ဒီ Moisturizer ဟာ အတွင်းပိုင်းထိရေဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး UVA rays, UVB rays, Blue light, Infrared radiation နဲ့ Pollution တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အသားအရေ ပျက်စီးမှာကို ကြောက်ရွံ့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ Lightweight ဖြစ်တဲ့အပြင် စုပ်ယူအားကောင်းတာကြောင့် အသုံးပြုသူတိုင်းအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ Skin Care Step တွေမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ မန်းကျည်းစေ့ ပမာဏလောက်ယူပြီး လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေအသုံးပြုကာ မျက်နှာအနှံ့ နဲ့ လည်ပင်းတဝိုက်ကို ညင်သာစွာ လိမ်းပေးပါ။ အသားအရေအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် Ingredient တွေမပါဝင်တဲ့အပြင် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်များကိုလည်း အောင်မြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အရေအသွေးကောင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ Moisturizer ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 38 $ ကျသင့်ပြီး UK-11 Direct Store တို့မှ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။